काठमाडौँ । नुवाकोटमा आयोजनास्थल रहेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘बी’ जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ । सो आयोजनामा विभिन्न वाणिज्य बैंक र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले लगानी...
आजदेखि तरकारीको बिक्री ठप्प
काठमाडौं । आजदेखि ब्यापारीहरुले तरकारी नबेच्ने घोषणा गरेका छन् । नेपाल फलफूल तथा तरकारी ब्यवसायी महासंघले आजदेखि अनिश्चितकालका लागि देशभर फलफूल तथा तरकारीको आपूर्ति र बिक्री ठप्प पार्ने निर्णय गरेको छ...
प्राइमलाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनीसँग बैंकास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । एनआई सी एशिया बैंक लिमिटेडले प्राइमलाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडसँग बैंकास्योरेन्स सम्झौता गरेको छ । यस सम्झौता अनुसार अब यस बैंकका ग्राहक महानुभावहरुले मुलुकभर फैलिएका बैंकको २३७ वटै शा...
एनआई सी एशिया र नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटबीच उपचारमा १० प्रतिशत छुट गर्ने सम्झौता
काठमाडौं । एनआई सी एशिया बैंक लिमिटेड र नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटल एण्ड मेडिकल कलेज, थापाथलीबीच बैंकसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरको उपचारमा १० प्रतिशत रकम छुट हुने वारे सम्झौता भएको छ । बैंकका कर्मचारी, ...
६२ रुपैयाँमा किनेर ११० मा बेच्दा पनि निगमलाई घाटा
इन्धन किन्दा भारत जान्छ वर्षमा १५२ अर्ब, सरकारले उठाउँछ ५५ अर्ब काठमाडौं । स्थानीय तहले अचाक्ली कर उठाएको विषयमा ठूलो बहस भइरहेको छ । तर, केन्द्रीय सरकारले वर्षौँदेखि अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु पेट्रो...
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले तीन÷चार वर्षभित्रमा निरपेक्ष गरिबी अन्त्य गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने बताएका छन् । लघुवित्त संघ नेपालले बिहिबार आयोजना गरेको ‘लघुवित्त कार्यशाला गोष्ठी’को उद्...
आइएमई लाइफ र ग्लोबल आइएमईबीच बैंक अस्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । आइएमई लाइफइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबबीच बैंक अस्योरेन्स सम्झौता भएको छ । उक्त बैंक अस्योरेन्स सम्झौतामा इन्स्योरेन्स कम्पनीतर्फबाट निमित्त महाप्रबन्धक दिनेश अम...
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि १५ बुँदे सुझावसहित गएको राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लिमि...
काठमाडौं । एनआई सी एशिया बैंकले तीनवटा नयाँ शाखा मार्फत एक सात सेवा शुभारम्भ गरेको छ । धादिङको धुनिबेशी न.पा. वडा नं.७, स्थित खानीखोलाशाखा र धुनिबेशी न.पा. वडा नं. ६,धार्केस्थित धार्केशाखाको धुनिबेशी ...
काठमाडौँ । लोडसेडिङ अन्त्य गरेर आम जनताको मन जित्न सफल नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रधिकरणलाई नाफामा लगेका छन् । ‘प्राधिकरणको गत आवको वार्षिक बजेटमा खुद नोक्सानी करीब ...
जनता बैंकको नयाँ शाखा नवलपरासीको बौदीकालीमा
काठमाडौं । जनता बै‌ककाे नयाँ शाखा नवलपरासीकाे बाैदीकाली गाउँपािलकामा स्थापना भइ सेवा सुभारम्भ भएकाे छ । वित्तीय सेवा मार्फत पनि संघीयतालाई दह्रो बनाउने उद्देश्यले स्थानीय तहबाटै सेवादिनको लागि बैंक...
एन आई सी एशिया बैंक र जनरल ईन्स्योरेन्स कम्पनीबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडले जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडसँग बैंकास्योरेन्स सम्झौता गरेको छ । सम्झौता अनुसार अब बैंकका ग्राहकहरुले मुलुकभर फैलिएका बैंकको २३७ वटै शाखाहरुबाट सहज ...
कानुन नबनाई कर असुली नगर्नुहोस : अर्थमन्त्री खतिवडा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कानुन नबनाई कर असुली नगर्न सम्बन्धित निकायलाई कडा निर्देशन दिएका छन् । आइतबार राजधानीमा आयोजित व्यवस्थापन गोष्ठीमा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले दोहोरो कर न...
विश्व बैंकले सहायता रकममा दोब्बरले वृद्धि गर्नेछ: अर्थमन्त्री
काठमाडौँ । विश्व बैंकले नेपाललाई उपलब्ध गराइरहेको सहायता रकममा दोब्बरले वृद्धि गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । सरकारको प्राथमिकता अनुसारका विकास आयोजना कार्यान्वयनमा सो बैंकबाट विकास सहयोग जुटाउन अमेरिका...
आइएमई लाइफइन्स्योरेन्स र नेपाल बंगलादेशबीच बैंक अस्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । आइएमई लाइफइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र नेपालबंगलादेश बैंक लिमिटेडबीच बैंक अस्योरेन्स सम्झौता भएको छ । उक्त बैंक अस्योरेन्स सम्झौतामा इन्स्योरेन्स कम्पनी तर्फबाट निमित्त महाप्रबन्धक दिनेश अ...
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा श्रेष्ठ
काठमाडौं । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा युगेशभक्त बादे श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । श्रेष्ठ सोही कम्पनीको महाप्रबन्धक तथा का.मु. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा कार्यरत...
काठमाडौं । बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई connectIPS e-payment प्रणालीमा आवद्ध गराउँदै लग्ने क्रममा नेपालक्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडले विहिबारबाट कारोबार शुरु गर्ने गरि हाम्रो विकास बैंकलाई उक्त प्रणालीमा आवद्...
शेयर बजार: सूचक घट्यो, कारोबार बढ्यो
काठमाडौँ । शेयर बजार आज पनि सामान्य अंकले ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १.४६ बिन्दुले घटेर एक हजार १८८ बिन्दुमा झरेको छ । क वर्गका कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्...
काठमाडौँ । विगतमा राम्रै आम्दानी गर्ने कूल १० वटा उद्योग तथा कम्पनीका दुई करोड ६४ लाख ३९ हजार ७५६ कित्ता शेयरको मूल्य करीब शून्य हुन पुगेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत भएपनि ती कम्पनीका शेयर वि...
मोबाइल हरायो ? चिन्ता नगर्नुस्, किनिदिने कम्पनी नेपालमै खुल्यो
काठमाडौँ । तपाईंको मोबाइल फोन सेट हरायो ? फुट्यो या बिग्रियो ? अब धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन । किनभने हरायो भने किनिदिने र टुटफुट भएमा बनाइदिने कम्पनी नेपालमै खुलेको छ । अझै अर्को खुशीको कुरा त के छ भने...